Tany Mahajanga no nisantarana izany izay notsindrian’ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka omaly ny profesora Rakotonirina Julio fa ezahina haparitaka any amin’ny distrika. Raha ny fantatra dia nisy ireo fitarainana hita teny amin’ny tambajotran-tserasera tato ho ato, izay nambaran’ny minisitra fa efa nandraisana andraikitra avokoa. Ny tanjona dia voatsabo ara-dalàna ny olona iray miditra hopitaly no sady milamin-tsaina ihany koa noho ny ezaka ataon’ireo mpitsabo. Mila madio anefa ireo olona marary tonga manatona ny tobim-pitsaboana. Tsy tokony himenomenona ireo milahatra nefa sendra ireo olona marary mafy tsy maintsy raisina mialoha. Tohanan’ny JICA ity hetsika ity ka misy ny fanaraha-maso ireo hopitaly mikasika ny fandraisany an-tanana ireo marary tsy an-kanavaka.